Hehy · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Marsa, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Marsa 2012
Soisa : Miarahaba Tsara Anareo Ny “Grikan'I Soisa Romande” !
Eoropa Andrefana 16 Marsa 2012
Lazaina matetika ho fitaratry ny fahaiza-miara-monina i Soisa, satria mahatazona ny fiavaham-pirenena mampivondrona ny olom-pirenena ao aminy sady ataony rehareha izany na dia tsy vitsy aza ny fifanebahana misy eo amin'ny Soisa alemana (miteny alemana) sy ny Soisa romands (miteny frantsay). Raha tsapa matetika eo amin'ny lafiny politika ary indrindra...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 16 Marsa 2012
Nandray kihon-dàlana iray vaovao ny fanentanana iray anaty media sosialy mba hanairana ny saina hanohana ny fisamborana ilay Ogande mpitarika ady anaty akata sady mpanao heloka an'ady efa karohana fatratra, Joseph Kony. Miley be aty anaty aterineto ankehitriny ireo lahatsary maka tahaka amin'ny fomba mahatsikaiky.
Eoropa Andrefana 09 Marsa 2012
Ny sampam-pitsikilovana miafina Alemàna dia nanara-maso mailaka efa ho 37 tapitrisa sy nandalinana azy ireny mba hamaritana raha toa ka mifandraika amin'ireo mason-tsivana isan-karazany mifamatotra amin'ny lohahevitra fampihorohoroana sy asa fanondranana an-tsokosoko isan-karazany, ohatra amin'izany ny teny hoe baomba. Sady sorena no mihanihany, ireto ny fanehoan-kevitra eny anivon'ny tambajotra sosialy alemàna naterak'ilay vaovao.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 08 Marsa 2012